Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, October 19, 2011 Wednesday, October 19, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ နည်းပညာတွေ သိပ်ကို တိုးတက်ထွန်းကားလို့နေပါပြီ။ အဲဒီလို တိုးတက်ထွန်းကားပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ သိပ္ပံနည်းပညာတွေနဲ့ အဖြေရှာလို့ မရနိုင်သေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ များစွာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူးနော်။ အဲဒီအထဲကမှ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုက မိုးကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ကျောက်တုံးတွေဟာ မိုးသီးမိုးပေါက်တွေလို အဆက်မပြတ် ကျလာတဲ့အဖြစ်အပျက် တစ်ခုလည်း အပါအဝင်ပါ။ ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ဘယ်သူက ပစ်လိုက်မှန်းမသိတဲ့ ကျောက်ခဲတွေ ကျလာတာမျိုး ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာမှာတော့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ပုဏ္ဏက တိုက်တယ်လို့ လူကြီးတွေ ပြောသံကြားဖူးပါတယ်။ အချို့ဒေသတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပဲမိုးရွာတာ၊ ငါးမိုးရွာတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ပဲစေ့တွေ မိုးလို အဆက်မပြတ်ကျလာတာ၊ နောက် ငါးအရှင်လတ်လတ်တွေ ကျလာတာမျိုးတို့ ကြားဖူးခဲ့ရပါတယ်။
ရှေးခေတ်ကတည်းက ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ပညာရှင်တွေ၊ လေ့လာသူတွေအတွက် ဦးနှောက်ခြောက်စရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန် ကြည်လင် နေတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ် ကနေ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲတွေဟာ မိုးရွာသလို ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျလာတဲ့အဖြစ်ဟာ မကြုံဖူးရင် ယုံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့ ကျောက်တုံးမိုး ရွာချတဲ့အဖြစ်ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဘယ်တုန်းကတည်းက ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ မသိရပေမဲ့ အစောဆုံး မှတ်တမ်းအဖြစ် ရှိခဲ့တာကတော့ ၁၆၉၀ခုနှစ်မှာ Robert Kirk ကနေ စပြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆၉၈ခုနှစ်မှာလည်း New Hampshire နဲ့ လန်ဒန်တို့မှာလည်း ကျောက်တုံးမိုးရွာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို Lithobolia သို့မဟုတ် “မကောင်း ဆိုးဝါးများ ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ကျောက်ခဲများ” လို့ ခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောက်တုံးမိုး အကြောင်း မှတ်တမ်းများကို ဆက်လက် လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်…
၁၉၀၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့မှာ Ohio ပြည်နယ်က Harrisonville မှာ ကျောက်ခဲမိုးရွာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို Buffalo Express မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပထမတုန်းကတော့ ကျောက်ခဲတွေဟာ Zach Dye ရဲ့ အိမ် ပြတင်းတံခါးကို လာမှန်ရာက စခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို သူ့အိမ်ပြတင်းကို ကျောက်ခဲတွေ လာမှန်ပြီးနောက်မှာ တစ်ရွာလုံးရဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်ကိုလည်း ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ကျောက်တုံးတွေ ကျလာပါတော့တယ်။ နောက်ရက်မှာလည်း ကျောက်ခဲမိုး ထပ်ပြီးတော့ရွာလာပြန်ပါတယ်။ ရွာသားတွေက ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက် မကောင်းတဲ့ အတိတ်နမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပြီး ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေကိုလည်း ဘယ်ကိုမှ မသွားစေဘဲ လူကြီးတွေ အနီးမှာသာ နေစေခဲ့ပါတယ်။ တတိယနေ့မှာလည်း ကျောက်ခဲမိုးတွေဟာ အဲဒီရွာကလေးမှာ ထပ်ပြီးတော့ ရွာကျလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ထူးဆန်းလှတဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ရွာသားတွေအတွက်တော့ အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၀၃ခုနှစ် စုမတြာကျွန်းမှာလည်း အလားတူ အဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကြုံခဲ့ရသူကတော့ W.G Grottendieck ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည် ပြောပြရာမှာ မနက်စောစော ၁နာရီလောက်အချိန် သူဟာ အိပ်မောကျနေခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အခန်းထဲကို အနက်ရောင် ကျောက်ခဲလေးတွေ ကျလာတဲ့အတွက် သူလန့်နိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ကျောက်ခဲလေးတွေဟာ ထိကိုင်လိုက်တဲ့အခါ ပူပူနွေးနွေးလေးဘဲ ရှိနေပြီး သူ့အခန်းရဲ့ အမိုးပေါ်မှာလည်း ကျောက်ခဲကျလာစရာ အပေါက်တွေဘာတွေ လုံးဝမရှိတဲ့အပြင် အခန်းရဲ့ ပြတင်းတံခါးများလည်း လုံခြုံစွာ ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ရောက်လာမှန်း မသိတဲ့ ကျောက်တုံးတွေဟာ ခပ်ဖြေးဖြေးလေး ကျလာတာကို သူ့မျက်စိနဲ့ မြင်လိုက်ရတယ်လို့ သူကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျောက်ခဲမိုး ရွာတဲ့အဖြစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြပါတယ်။
၁၉၁၃ခုနှစ်မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Marcinelle က အိမ်တစ်အိမ်ဟာ ၄ရက်ဆက်တိုက် ကျောက်ခဲမိုး ရွာခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရဲစခန်းက မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေဟာ ၄င်းအိမ်ဘေးဝန်းကျင်ကနေ နေရာယူပြီး အိမ်တစ်ခုလုံးနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ကင်းပုန်းဝပ်ပြီး စောင့်ကြပ်နေခဲ့ကြပေမဲ့ ကျောက်ခဲတွေကျလာတာကိုသာ မြင်တွေ့ရပြီး ပစ်တဲ့သူကို လုံးဝမတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲအရာရှိဖြစ်သူက ကျွန်တော်ဟာ ကျလာတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကို အတိုင်းသား မြင်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်တုံးရဲ့ အရှိန်ကြောင့် အိမ်ပြတင်းမှန် ကွဲသွားတာကိုပါ တွေ့ရပေမဲ့ ဘယ်သူက ပစ်မှန်း မသိရဘူးလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ၄ရက်အတွင်း ကျလာတဲ့ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေဟာ အလုံးရေ ၃၀၀ခန့် ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၂၁ခုမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Aedeche က စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးတစ်ခုမှာလည်း ကျောက်ခဲမိုး ရွာတဲ့အဖြစ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သို့သော် ထူးဆန်းတာက အများသူငှာတွေလို ရက်နည်းနည်းသာ ရွာတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ၄လခန့် ကြာအောင် ခြံထဲကို ကျောက်တုံးတွေ ကျနေခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်တုံးတွေကြောင့် ကွဲသွားတဲ့ မှန်ပြတင်းကနေ ပန်းသီးတွေပါ ကျလာတာမျိုးကို ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာလည်း ကျောက်ခဲတွေ ကျလာတဲ့ အကြောင်းရင်း၊ အဖြစ်အပျက်ကို ရှာဖွေမရခဲ့ပါဘူး။
၁၉၄၃ခု နှစ်မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Oakland က Mrs Irene Fellow တို့မိသားစုနေထိုင်ရာ အိမ်ကို နှစ်ပတ်တိတိ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ပစ်ခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ကို ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့သူက ကျောက်ခဲတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ပစ်ပေါက်နေခဲ့တယ် ဆိုပြီး ရဲစခန်းကို သွားရောက် တိုင်ကြားပါတယ်။ ရဲစခန်းက လာရောက် စစ်ဆေးကြည့်ရှုတဲ့ အချိန်မှာ နံရံတွေ၊ ပြတင်းပေါက်တွေမှာ ကျောက်ခဲ ထိမှန်ခံထားရတဲ့ အရာတွေ၊ ခြံဝင်းထဲမှာလည်း အပြင်က ရောက်လာတဲ့ ကျောက်ခဲတွေကို တွေ့ရပေမဲ့ ဘယ်နေရာက ပစ်လိုက်တဲ့ ကျောက်ခဲတွေမှန်း စုံစမ်းလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ရက်အတန်ကြာ စုံစမ်းပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ မျက်မြင်သက်သေ အထောက်အထားကိုလည်း မတွေ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီ အဖြစ်အပျက်ဟာလည်း စုံစမ်းလို့မရတဲ့ အမှုတစ်ခုအနေနဲ့သာ ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။
နောက်ထပ် အလားတူဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ ၁၉၆၃ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ရက်နေ့က နယူဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဝယ်လ်လင်တန်က အိမ်တစ်အိမ်မှာ တည်းခိုနေတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကျောက်ခဲမိုးရွာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟာ ၇နာရီခန့်ကြာအောင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သွားရောက် စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ အိမ်၊ ခြံဝင်းထဲမှာ ကျနေတဲ့ ကျောက်ခဲတွေကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား အကြွေစေ့တွေ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမတော့ ထိုအိမ်က ဧည့်သည်တွေ ကျနေတဲ့ အကြွေစေ့လို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း အကြွေစေ့ပေါင်းများစွာကို တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ အကြွေစေ့လည်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုကြပြီး နောက်မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အကြွေစေ့နဲ့ ကျောက်ခဲ တွေဟာ ဘယ်က ရောက်လာတယ်ဆိုတာ အဖြေမရှိ ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ နောက်ထပ် နှစ်ညတိတိ အလားတူအဖြစ်မျိုး ဖြစ်ပြီးနောက် ကျောက်ခဲမိုးတွေ ကျလာတာ ရပ်သွားပါတော့တယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ကျောက်ခဲတွေ ကျစေတဲ့ တရားခံတော့ဖြင့် ရှာဖွေလို့ မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။
၁၉၇၃ခုနှစ်မှာ နယူးယောက် Skaneateles တံငါသည်နှစ်ယောက်နောက်ကို ကျောက်ခဲလေးတွေနဲ့ သူတို့ ဘယ်နေရာကိုသွားသွား အနောက်ကနေ ပစ်ပေါက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ငါးမျှားရာကနေ အိမ်ကို အပြန်မှာ ခုလို ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ပစ်ခံရတာဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ကားဆီကို ရောက်အောင် အမြန်ဆုံး ပြေးကြပါတော့တယ်။ မကြာခင်မှာ ကျောက်ခဲလေးတွေ ကျတာ ရပ်သွားပြီးနောက် အရက်သောက်ဖို့ တိုင်ပင်ကြပြီး ဘားတစ်ခုခုကို ထွက်လာကြချိန်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ဆီကို ကျောက်တုံးတွေ ပြန်ပြီး ကျလာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ အဖြစ်အပျက် မှာလည်း ကျောက်တုံးတွေ ပစ်တဲ့ တရားခံ၊ အထောက်အထားများကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အာရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာ ၁၉၈၃ခုနှစ်ကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျောက်ခဲမိုးရွာတဲ့အဖြစ် ကြုံရပြန်ပါတယ်။ Berkbigler မိသားစုဟာ အိမ်အသစ်တစ်အိမ်ကို ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ပြီး နောက်မှာ အဲဒီအိမ်ကို ညနေ ၅နာရီခွဲကနေ ည ၇နာရီအတွင်းမှာ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပေါက်တာ ခံကြရပါတယ်။ ဒေသခံ တာဝန်ရှိသူများ အဲဒီအိမ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ မှာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျောက်ခဲနဲ့ ပေါက်တာခံကြရပြီးနောက် ထိုအိမ်ကို လာရောက်ဖို့ တွန့်ဆုတ် သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ထူးဆန်းလှသော ကျောက်ခဲမိုးရွာတဲ့အဖြစ်က ကျောက်ခဲတွေဟာ အလွန်တရာမှ ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ ကားဂိုဒေါင်ကြားထဲကနေ ဖြတ်သန်းပြီး ကားပြတင်းဆီ ရောက်လာ တာဟာ မယုံ နိုင်စရာ ကောင်းလှတယ် လို့လည်း ရဲတွေက ဆိုပါသေးတယ်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ခဲမိုးရွာချတဲ့ အဖြစ်တွေထဲက အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနှံ့အပြားမှာ အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး မြောက်များစွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူး ပါသေးတယ်။ သို့သော်လည်း ဖြစ်ရပ်တိုင်းမှာ ကျောက်ခဲမိုးရွာစေတဲ့ တရားခံ (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ သက်သေအဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ သိပ္ပံပညာနဲ့ အဖြေရှာလို့ မရနိုင်တာတွေ လူသားတို့ မစဉ်းစားနိုင် သေးတာတွေ ၊ အံ့သြ ထူးဆန်းတာတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေဘဲ မဟုတ်ပါလားနော်။ ဒီအဖြစ်အပျက် အကြောင်းများကိုတော့ Maria ရဲ့ “Mystical Rain of Stones” ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.. ကျောက်ခဲမိုး၊ ငါးမိုး၊ ပဲမိုးတွေ ရွာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေ့ကြုံဖူးတာ၊ ကြားဖူးတာများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ကော်မန့်မှာ ရေးသွားခဲ့ပါ။ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးချင်တာလေးတွေ ရှိရင်လည်း စိတ်တိုင်းကျသာ ရေးသွားခဲ့ကြပါလို့နော်...
Links to this post 35 comments
ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဆောက်တဲ့ မြို့
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, October 14, 2011 Friday, October 14, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ Monsanto မြို့ကလေး အကြောင်း ပြောပြရင် Mansanto မြို့ကလေးဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်း နှစ်သက်စဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ တောင်စောင်းပေါ်က မြို့ငယ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုများလဲဆိုရင်ဖြင့် အဲဒီမြို့ကလေးကို ရောက်သွားသူတိုင်းဟာ မြို့ကလေးရဲ့ ထူးခြားမှုကို သတိမပြုမိဘဲ မနေနိုင်အောင် ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြို့ကလေးမှာရှိတဲ့ အိမ်တွေဟာ သစ်တွေ၊ ဝါးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ကြီးမားလှတဲ့ ဂရင်းနိုက် ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အချို့အိမ်တွေကတော့ ကျောက်တုံးကို ထွင်းဖောက်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ ကျောက်တုံးအရွယ်တော်များနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။ မြို့ကလေးရဲ့ လမ်းတွေဟာဆိုရင်ဖြင့် ကျောက်တုံးတွေကြားထဲမှာ ကွေ့ပတ်ဖောက်လုပ်ထားပြီး အချို့လမ်းတွေဆိုရင် ကျောက်တုံးကိုထွင်းပြီးမှ ဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Mansanto မြို့ကလေးဟာ ရှေးကျပြီး ပေါ်တူဂီဆန်လွန်းတဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ် ကတည်းက ပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေဟာ ဒီဒေသက တောင်စောင်း တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကြားထဲမှာ အိမ်ခြေဆောက်လုပ်ပြီး အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှာ Monsanto မြို့ကလေးကို ပေါ်တူဂီအဆန်ဆုံး မြို့ကလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုစဉ်ကတည်းက Monsanto ရွာကလေးမှာ အဆောက်အဦးအသစ်တွေ ဆောက်လုပ်တာကို ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆယ်စုနှစ် များစွာကြာလာပေမဲ့ မြို့ငယ်ကလေးရဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားခြင်း မရှိဘဲ ရှေးခေတ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း အိမ်ပုံစံတွေကသာ များပြားစွာ ရှိနေခဲ့တာကြောင့်လည်း ရှေးခေတ်လက်ရာအတိုင်း ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ မြို့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွေကိုလည်း အမိုးအနီရောင်များဆင်တူ သုတ်ထားကြပါတယ်.
အပေါ်စီးက မြင်ရတဲ့ Monsanto
ကျောက်တုံး ၂တုံးကြားက အိမ်
မြို့ကလေးမှာရှိတဲ့ အိမ်တွေကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ကျောက်တုံးကြီးတွေ ဖိညှပ်ခံထားရသလို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အချို့တော့ ဒီမြို့ကလေးဟာ ဆင်းဒဝစ်နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပေါင်မုန့်နှစ်ခုကြားမှာ အသားညှပ်ထားသလို၊ ဒီမြို့ကလေးက အိမ်တွေကလည်း ကျာက်တုံးတွေကြားထဲမှာ ကပ်ကပ်သပ်သပ် ညှပ်ပိတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာမို့ပါ။ စပိန်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ Salamanca ကနေ ၁၆၀ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပြီး ရွာကလေးဆီကိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သွားရောက်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပေမဲ့လည်း ကျောက်တုံးကြီးတွေ ပေါများလှတဲ့ တောင်စောင်းပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ ရွာကလေးရဲ့ ရှုခင်းနဲ့ ရင်သပ်အံ့သြဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းတို့ကို မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဘဲ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရောက်ရပေမဲ့လည်း ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် တွေ့မြင်ရခဲတဲ့ အိမ်ကလေးများနဲ့ရွာကလေးကို မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း Monsanto မြို့ကလေးက ဒေသခံတွေဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးတတ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အလွန်သဘောထားပြည့်ဝကာ ဆက်ဆံရေးကောင်းသူများ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ရောက်ဖူးသူများက ဆိုပါတယ်။
the Chapel of Santa Maria do Castelo
Church of St. Miguel
၁၂ရာစုခေတ်လက်ရာ São Miguel Chapel
မြို့ကလေးရဲ့ လမ်းတွေဟာ ကျောက်တုံးတွေကြား ဖောက်လုပ်ရတာဖြစ်လို့ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းလှပြီး မြည်းတစ်ကောင်စာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရုံလောက်သာ အကျယ်ရှိတဲ့ လမ်းတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပေါ်အထိ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လမ်းမဟာ လှေကားထစ်ပေါင်း များစွာနဲ့အတူ ပေလေးရာခန့်အထိ တောက်လျောက် အတက်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အိမ်တွေက ကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ ဆောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ ကျောက်ပြား၊ ကျောက်တုံးငယ်များနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး ရွာလမ်းတစ်လျှောက်ကိုလည်း ကျောက်ပြားများ သပ်ရပ်စွာ ခင်းထားပါတယ်။ ရွာရဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတော့ ပျက်စီး ယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်း ရဲတိုက်ကြီး ရှိနေပါတယ်။ ကျောက်တုံးတွေကြားမှာ တည်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင် ရှေးခေတ်လက်ရာ အဆောက်အဦးများ၊ ရှေးကျတဲ့ ကျောက်တုံးတည်ဆောက်ခြင်း အတတ်ပညာ လက်ရာများစွာ ရှိနေတဲ့ မြို့ကလေး ဖြစ်တာကြောင့်လည်း Monsanto မြို့ကလေးကို သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော်လည်း အခြားသော မြို့များနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့လက်ရာ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ကျောက်တုံးတွေကြားက ရှေးခေတ်ပေါ်တူဂီမြို့ကလေးဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
ဒီနေရာမှာတော့ Monsanto မြို့ကလေးနဲ့ ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ပိနေတဲ့မြို့အကြောင်းကို ရေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်း စိတ်ရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။
Photos : http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Portugal/North/Castelo_Branco/Monsanto/
Links to this post 28 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, October 12, 2011 Wednesday, October 12, 2011
ဒီနေ့ဟာ မိုးလေကင်းလွတ်တဲ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခါကြီးရက်ကြီး မြတ်သောနေ့ ဖြစ်လေတော့ ဘုရားဖူးထွက်ကြရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့အတူ မြန်မာပြည်တွင်းတစ်နေရာက ဘုရားဖူးဖို့ သွားကြပါစို့လားနော်.. ဟိုတလောက မူဆယ်မြို့က ဘုရားကို ဖူးခဲ့ကြသေးတာ မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီတစ်ခါတော့ မူဆယ်နဲ့ မဝေးလှတဲ့ ရှမ်းတို့ရဲ့မြို့ကလေး နမ့်ခမ်းဆီ အလည်သွားပြီး ဘုရားဖူးကြပါဦးစို့ရဲ့နော်။ မူဆယ်မြို့ကနေ ထွက်လာပြီး စောမွန်လှရဲ့ မွေးရပ်မြေ စယ်လန့်ရွာ ကလေးကို ဝင်ပြီးတာနဲ့ မူဆယ်မြို့ကနေ ကိုးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ နမ့်ခမ်းမြို့ကို ရောက်ပါတယ်။ နမ့်ခမ်းကနေ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ထိ သွားလို့ရပါတယ်။ မူဆယ်မြို့နေ ကားနဲ့ထွက်လာပြီး လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေကိုဖြတ်သန်းပြီး နာရီဝက်မရှိခင်မှာ နမ့်ခမ်းမြို့ ကို လှမ်းမြင်နေရပါပြီ။
နမ့်ခမ်းမြို့ကို သက္ကရာဇ် ၁၇၇၇ ခုနှစ်မှာ ကျေးရွာငယ်ကလေးအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပေမဲ့ သာယာအေးချမ်းပြီး လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းတာကြောင့် လူဦးရေ တဖြေးဖြေး တိုးတက်များပြားလာတာကြောင့် မြို့ပြအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ နမ့်ခမ်းဟူသည်မှာ မြို့တောင်ဘက်နားတွင်ရှိတဲ့ နမ့်ခမ်းဖောင် ချောင်းကို အစွဲပြုပြီး မှည့်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့်နမ့် ဆိုသည်မှာ မြန်မာလို ရေ၊ ခမ်းဖောင်ဆိုသည်မှာ ရွှေမှုန်များဟု အဓိပ္ပါယ်ရတာကြောင့် နမ့်ခမ်းဖောင်ချောင်းကလေးမှာ ရွှေထွက်သည့် ချောင်းတစ်ခုအဖြစ် ယခုတိုင် ရွှေကျင်သူများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း နန့်ခမ်းဖောင်ချောင်းဟာ ရွှေလီမြစ်ထဲကို စီးဝင်ပါတယ်။ နမ့်ခမ်းမြို့ဟာ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ ကပ်လျှပ် ရွှေလီမြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိတာကြောင့် တရုတ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ ပေါများပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖို့ မြေသြဇာကောင်းမွန်လှတဲ့ လယ်ကွင်းများ၊ လ္ဘက် စိုက်ပျိုးဖို့ တောင်ကုန်း တောင်တန်းကြီးများ ပေါများလှပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကတည်းက သာသာနာရောင်ဝါလင်းသည့် မြို့ဖြစ်တာကြောင့် ဘုရားကျောင်းကန်၊ စေတီပုထိုးများ ပေါများတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့အဝင် လမ်းမကြီးဘေးက ဘုရား
မူဆယ် မန့်ခမ်းကြားက ရှမ်းတို့ရဲ့ အိမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ဝိုက်မှာ ပြောင်းဖူးစိုက်တာ များတဲ့အတွက် ပြောင်းဖူးများကို ခုလိုအခြောက်ခံထားတာ ပြောင်းဖူးပေါ်တဲ့ရာသီဆိုရင် အိမ်တိုင်းနီးပါး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။